आँखीभौँ छेड्दा एक्कासी फुल्यो अनुहार, एक हप्ताभित्रै युवतीको मृ,त्यु – Classic Khabar
आँखीभौँ छेड्दा एक्कासी फुल्यो अनुहार, एक हप्ताभित्रै युवतीको मृ,त्यु
July 17, 2021 128
आफ्नै घरमा आँखीभौँ छे’डेका कारण स्कूलमा पढ्दै गरेकी एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । १५ वर्षे इसाबेला इड्वार्डा सुसाले घा’तक संक्रमणको सामना गर्नुपर्यो जसका कारण उनको अनुहार बेलुन झैं सुन्नियो भने उनका आँखा यति धेरै सुन्निए कि ती सधैंका लागि बन्द हुन बा’ध्य भए । उनले ब्राजिलको मिनास गेराइ प्रान्तस्थित आफ्नो घरमा एक साथीको सहायताले आँखीभौँ छे’डेकी थिइन् ।
ती किशोरीले आँखाीभौँ छेड्नका लागि आफ्ना आमा–बुवा र आफन्तसँग अनुमति लिएकी थिइन् तर यसका लागि कसैले पनि अनुमति भने दिएका थिएनन् । आँखीभौँ छेडेको तीन दिनपछि इसाबेलामा निकै डरलाग्दा लक्षण देखिन थाले । उनको आँखा वरिपरिका भाग असाध्यै सुन्निएपछि अस्पताल पुर्याइयो जहाँ उनलाई चार पटक हृ’द’य’घा’त भयो ।
उनको शरीरले बाहिरको वस्तुलाई स्वीकार गरेन तसर्थ उनको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन खस्कियो । त्यसपछि उनलाई थप सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याइयो जहाँ उनलाई एक हप्तासम्म भेन्टिलेटरमा राखियो । तर उनलाई बचाउन सकिएन । घटनाले उनको परिवारलाई वि’क्षिप्त बनायो ।
उनको मृत्युपछि उनकी काकी जुर्सिनी डि सुसाले भनिन्, ‘यो एउटी काकीको अनुनय बिन्ति हो जसले हालै एक अति नै सुन्दर र विशेष छोरी गुमाएकी छिन् ।’ ‘आफ्ना आमाबुवाले भनेको मान्नुहोस्, काका–काकीले भनेको पनि सुन्नहोस् र आफ्ना हजुरबुवा–आमाको कुरालाई खेर जान नदिनुहोस् ।’ डाक्टरका अनुसार इसाबेला बाँचेकी भए पनि उनको दृष्टि गुम्न सक्दथ्यो जहाँ उनले छेडेकी थिइन् । स्वास्थ्य अधिकारीले यस्ता जति पनि कुराहरु लाइसेन्स प्राप्त क्लिनिक वा विज्ञमार्फत् नै गराउनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण २ गते शनिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextसिर्जना बस्नेत प्रकरण – झुक्किएर छोरीको बाटो हेर्दै आमा भन्छिन्, ‘न कटर खान पाइ, न कुर्था नै लगाउन पाइ’
दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ! बल्ल बाँच्ने आशा पलायो !
आज कुन-कुन स्थानमा वर्षाको सम्भावना ?
एमसीसीबारे प्रचण्डको जिब्रो फेरियो, आज पनि अदालतमा लफडा हेरियो